1। Orlistat के हो?
2। हामी को हुन्?
3। Orlistat कसरी काम गर्दछ?
4। मैले Orlistat लाई कसरी लिनु पर्छ?
5। Orlistat लिने क्रममा के गर्ने?
6। के ओर्लिस्ट्याट मेरो लागि सही छ?
7। Orlistat को प्रयोग को लाभहरू के हो?
8। Orlistat लिने साइड इफेक्टहरू के हुन्?
9। Orlistat, Sibutramine, र Lorcaserin को बीच के अंतर छ?
10। त्यहाँ कुनै पनि ड्रिगरेसन हो जो Orlistat नतिजालाई असर गर्छ?
11। Orlistat को बारे मा महत्वपूर्ण संक्रमण
12। माथि उठाउनुहोस्
Orlistat के हो?
कुनै कुरा छैन वजन घटाने उत्पादनहरु विफलता छ, Orlistat तपाईं को लागि एक नयाँ बिहार साबित हुनेछ। यदि तपाईं सोच्नुभएको हो कि orlistat के हो, आज तपाईं यसको बारे बढी जान्न पाउनुहुनेछ। सूचीबद्ध काउंटरमा राम्रो वजन घटाने औषधि यसले मानिसहरूलाई टुङ्गोलाई तेज तुल्याउँछ। केही प्रमाण चाहनुहुन्छ? अध्ययनहरू देखाइएका छन् कि एकपटक तपाईंले Orlistat प्रयोग गर्नुहुँदा, तपाईंको शरीरले एक्लो आहार गर्दा भन्दा बढी वजन गुमाउनेछ। यदि तपाईं Orlistat लिन चाहानुहुन्छ भने अझै पनि शंकास्पद हुनुहुन्छ भने, म Orlistat फाईलहरूको बारेमा थप बताउनेछु, Orlistat नतिजा र Orlistat किन्नु पर्छ र तपाईं पहिले यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ। एकपटक तपाईंले यो चमत्कारिक औषधिको बारेमा जान्नुभएपछि तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि यो तपाईंको वजन घटाने यात्रामा एक प्रमुख औषधि हो।
हामी Phcoker.com, एक चीन आधारित उद्यम छ कि वितरण, निर्माण, र सक्रिय दबाइ बीच मध्यवर्ती र Orlistat सहित उत्पादनहरु को विपणन।
हाम्रो उद्यममा, हामी विभिन्न खेतका सबै भन्दा राम्रो, प्रयास र परीक्षण गरेका छौं। हाम्रो उद्यममा सफलता उनको पेशेवर अनुभव, उत्कृष्ट प्रशिक्षण, र उत्कृष्ट प्रदर्शनको बारेमा ल्याइएको छ। एक संस्थाको रूपमा, हामी लगातार प्रशिक्षण, निर्देशन र कोचिंग मार्फत आफ्नो विकास पोषण गर्न कडा प्रयास गर्छौं। हामी उनीहरूको प्रतिक्रियाको लागि अनुमति दिन र आफ्नो मनोबल वृद्धि गर्न संचारको लागि पर्याप्त उपकरण प्रदान गर्दछौं।
हामी बजारमा उत्कृष्ट गुणस्तर उत्पादन गर्दछौँ। तपाईं हामीलाई खरीद गर्न बैंक तोड्न छैन; तपाईं आश्चर्यजनक हुनेछ कि तिनीहरू कसरी सस्ती छन्। हाम्रा उत्पादनहरू वैध छन्, र तिनीहरूले उद्देश्यको सेवा गर्नेछन्। यो सम्भव छ कि हामी हाम्रो सबै उत्पादन प्रक्रियाहरूमा पहिलो-कक्षाको उपकरण प्रयोग गर्दछौं। उत्पादनको क्रममा, हामी सबै नियमहरू र गुणस्तर जाँचहरू पालन गर्दछौं भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि हामी यी उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं जसले हाम्रो ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
फोकोकरमा हामी कडा परिश्रम राख्नेछौं कि हाम्रो वातावरणलाई सफा राखेर निश्चित गर्नुको पछाडि हामी गतिविधिहरू प्रदुषण गर्दैनौं। अन्तमा, हाम्रा ग्राहकहरू हाम्रो प्राथमिकता हुन्। हाम्रो ग्राहक सेवा प्रत्येक ग्राहकको धेरै उत्सुक र उत्तरदायी छ। अरु कुराले हामीलाई फरक पार्ने अर्को कुरा हो कि हामी उपभोक्ता प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। यो उजूरी वा सिफारिस हुनुहोस्; तपाईंको आवाज सधैं स्वागत छ। आजबाट किन्नुहोस् र विश्वभर सर्वोत्तम सेवाहरूको अनुभव गर्नुहोस्।
Orlistat कसरी काम गर्दछ?
Orlistat भूख suppressing द्वारा काम गर्दैन; यसले वसाको मात्रा कम गर्छ जुन तपाईंको शरीर तपाईंले उपभोग गर्ने खानाबाट अवशोषित गर्दछ। एकपटक यसलाई पेट एंजाइम लिपिसमा एकपटक जोड्छ, यसले यसलाई पाचनमा राख्ने वा केहि मोटो अणुहरूलाई तोड्ने गर्दछ। भ्याटको ब्लक गरिएको रकम 25% को बारेमा हो। नतीजा, अपरिचित वसा प्रणाली को माध्यम ले जान्छ र बर्बाद को रूप मा सफाया छ।
साथै, अध्ययनले देखाउँछ कि एकपटक तपाईंले Orlistat लिनु भएको छ, भिजुअल वसामा महत्त्वपूर्ण मात्रामा कम हुन्छ। यसको फाइदा यो स्ट्रोक, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, र2मधुमेह टाइप गर्दा पीडितको जोखिम घट्छ।
मैले Orlistat लाई कसरी लिनु पर्छ?
यस औषधिको उत्तम बाहिर निकाल्न, तपाइँलाई दाँया तिरस्कार गर्नुपर्छ Orlistat खुराक। क्याप्सूल फारममा आउँदैछ, तपाईं सधैँ एकै पप गर्न सक्नुहुन्छ र दिनको तीन चोटि लिन सक्नुहुनेछ। वांछित Orlistat नतिजाहरू प्राप्त गर्न, तपाईंले भोजनको तुरुन्तै लिनु पर्दछ जुन वसा वा अधिकतम एक घण्टा पछि। यदि तपाइँ एक भोजन खानुहुन्छ जुन कुनै चड्डी समावेश छैन, तपाईलाई तपाइँको खुट्टा छोड्न सल्लाह दिइन्छ। साथै यदि तपाईंले खाना छोड्नु भयो भने, तपाईंले खुराक पनि छोड्नुपर्छ।
वजन घटाने पूरक हुनुको बावजूद, तपाईं सबै समय चिसो बर्गर खाने छैन। अतिरिक्त वसाको साथ खानेकुरा खानेकुराले तपाईंलाई असुविधाजनक पाचन साइड इफेक्टहरू गुमाउन सक्छ। यदि तपाईं Orlistat फायदाहरू अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले कम-मोटो डेयरी उत्पादनहरू र मासुको दुबारा कटौती खानुपर्छ। सामान्यतया, 30 भन्दा बढी वसाको खाना भनेको एक चल्ने क्षेत्र हो। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ प्रति दिन 1000 क्यालोरी लिनुहुन्छ भने, तिनीहरूका 330 भन्दा बढी भन्दा वसाको रूपमा हुनुपर्छ।
तपाईं सही बाटोमा हुनुहुन्छ भनेर निश्चित हुन, हरेक भोजनमा तपाईंले सबै वसाको ट्रयाक राख्नुहोस्। तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ? सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले उपभोग गर्ने सबै खाद्य वस्तुहरूमा लेबल पढ्नुहुन्छ। तपाईले लिनु भएको सर्भरको संख्यामा ध्यान दिएर, तपाईले सजिलै संग वसाको मात्राको गणना गर्न सक्नुहुनेछ। यदि एक स्वस्थ आहार योजनाको साथ आउँदो रुचि छ भने, आहार चिकित्सक, पोषण सल्लाहकार वा डाक्टरले तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ। सबै चीजहरू तपाईं SARM हरू भन्दा पहिले जान्नु पर्छ
तपाईंलाई ध्यान दिन आवश्यक छ कि यो कुरा भनेको यो औषधिको फ्याट-ब्लक गर्ने गुणले तपाईंको शरीरमा फ्याट-घुलनशील भिटामिनहरू अवशोषित गर्न सक्दछ। भिटामिनमा कमजोरीबाट तपाईंको शरीरलाई रोक्नको लागि, यस औषधिसँग उपचार गर्दा दैनिक बहुविटामिनहरू K, E, D, A, र बीटा कार्टोन लिनुहोस्। लिनको लागी सबैभन्दा राम्रो प्रकार बहुव्यापीमिनहरू जान्न, तपाइँलाई तपाइँको डाक्टरसँग कुराकानी गर्न विचार गर्नु पर्छ। तथापि, तपाईंले Orlistat र यी भिटामिनहरू एकै समयमा लिनु हुँदैन। औषधि लिन अघि दुई वा बढी घण्टा भिटामिन लिनुहोस्।
के हुन्छ यदि एक खुसी खुसी छ?
खुसी छुनुहोस्। तथापि, तपाईंले यो हुँदैन, चिन्ता गर्नुपर्दछ; यो सम्भव छ। यदि तपाईं आफ्नो खाना खाएको हुनाले एक घण्टा पछि, छुटेका खुट्टा खुवाउन र अर्को तालिकाको रूपमा लिनुहोस्। मिस्ड डोजको लागि बनाउने उद्देश्यको साथ अतिरिक्त औषधि लिन को लागी कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। तपाईंले आफैलाई विषाक्त हुन सक्नुहुनेछ।
कहिलेकाहीँ तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईं केवल सब्जी वा फल खाएर मात्र खानुहुन्छ। यस अस्थिर भोजनको आनन्द लिने कुनै चिन्ता छैन; सबै तपाईंले गर्नु पर्छ भोजन पछि Orlistat खुराक को सम्झना छ।
एक उच्च Orlistat खुराक तपाईंलाई अतिरिक्त लाभ दिँदैन। यसको सट्टा, यसले तपाईंको शरीरमा हानिकारक हुन सक्छ। यदि तपाइँ सिफारिस गरिएको खुसी भन्दा बढी लिनुहुन्छ भने, तपाईले सामान्य जस्ट्रोटिस्टिनल-सम्बन्धित प्रभावहरूको अनुभव गर्न सम्भव छ। तिनीहरू मल, तेल मल, पेट दुखाइ, ग्यास, दस्त, उल्टी, र नलीमा असंगत छन्। यदि तपाईले उच्च-फूड भोजन खाएमा साइड इफेक्टहरू गम्भीर हुन सक्छ र ओर्लिस्टरेट ओभरडिस लिनुभयो।
यदि यो हुन्छ भने, तपाईंले यसलाई डाक्टरको ध्यानमा ल्याउन वा जइन्स मद्दतलाइनलाई कल गर्नुपर्छ।
Orlistat लिने क्रममा के गर्ने?
एकपटक तपाईं Orlistat उपचारमा एकपटक, तपाईंलाई केहि चीजहरू लिनबाट जोगिन आवश्यक छ। पहिलो एक धेरै उच्च-मोटो भोजन हो। यसबाट जोगिनको लागि कारण यो तपाईंको आंतों र पेट मा अप्रिय साइड इफेक्ट हुन सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं कुनै पनि वसालाई बचाउनु हुँदैन; यहाँ तपाईं कसरी वसाको मात्रा कम गर्न सक्नुहुनेछ कि सुझावहरू छन्:
तपाईं चटनीमा निचो-वोसो कुक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन चटनीको5ग्राम प्रति वसा को 100 ग्राम भन्दा कम छ।
कम-फैट स्प्रेड, कम-मोटो पनीर, कम-क्यालोरी रङ्ग, र कम-मोटो डेयरी खानाहरूको लागि जानुहोस्, उदाहरणका लागि, स्किम्ड वा अर्ध स्किम्मेड दूध।
खाना पकाउँदा वसा थप्न नदिनुहोस्; बरु, तपाईं माइक्रोवेव, बेक, पोख वा ग्रिल गर्न सक्नुहुनेछ।
चिकन छाला र सुँगुरमा चिसो खानु हुँदैन। तपाईं बदामको मासुको काटीको लागि जानुहुन्छ र कुनै पनि देखिने फ्याँट हटाउन सक्नुहुनेछ।
नियमित / मक्खन स्प्रेडको सट्टा एक कम फैला फैल छान्नुहोस्।
Cyclosporine लाई Orlistat सँग पनि लिइएन। यदि तपाईंलाई यो लिन आवश्यक छ भने, यो Orlistat लिनु अघि तीन घण्टा हुनुपर्छ।
साथै, यस औषधिमा लेथोथीरोक्सिन (जस्तै सिन्थ्रोइड) लाई टाढा राख्नु पर्छ। तपाईं Orlistat लिन अघि र पछि चार वा बढी घण्टा लिन सक्नुहुनेछ।
के ओर्लिस्ट्याट मेरो लागि सही छ?
वजन घटाने को पूरक हुनु भएको छ, यदि तपाई वजन खोने मा लक्ष्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको लागि काम गर्नेछ। आहार र व्यायाम बेकार हुन सक्छ, तर एक वजन व्यवस्थापन कार्यक्रम जो ओलिलिस्ट को प्रयोगमा वास्तविक सम्झौता हो। यदि तपाइँ Orlistat प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसको अर्थ यो होइन तपाईं बस्नु पर्दछ र परिणामहरूको लागि पर्खनुहोस्। एक स्वस्थ जीवन शैली पछ्याउँदै स्वस्थ खाई समावेश छ र नियमित अभ्यास गर्नाले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ वजन कम गर्नुहोस्.
के तपाईं यो सूची लिनु भएको छ Olistlist? यो सर्वोत्तम वजन घटाने औषधी हो तर तपाईं कसरी जान्नुहुन्छ कि यो वजन तपाईं कम गर्नका लागि यो समय हो। एक पल्ट तपाईंले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ अधिक वजन छ भने, तपाईंले वजन गुमाउँदा एक कदम लिन कहिले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। राम्रो तरिकाले बताउनु भएको छ कि यदि तपाईं अधिक वजन छ भने डाक्टर देखेर केहि संकेतकले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछन् कि तपाइँ रेखा पार गरेको छ भने। पहिलो कुराले तपाईंलाई जगेडा कल गर्न सक्ने एक उच्च बीएमआई हो। बीएमआई नम्बरले संकेत दिएको छ कि तपाईंको शरीरको ऊतकको प्रति मीटर चक्की वा उचाईको वजन। एक स्न्यापमा, तपाईं आफ्नो उचाई र वजन जाँच गर्न सक्षम हुन सक्नुहुनेछ कि तपाईंको शरीरको मास इन्डेक्स (BMI) ठीक छ कि छैन। यदि तपाईंको BMI 18.5-24.9 हो, यो सामान्य मानिन्छ जस्तो लाग्छ जब सम्म 25-29.9 को अनुसार तपाईं अधिक वजन छ।
अर्को थोरै ज्ञान हो कि तपाइँ कम से कम छ आफ्नो कमर परिधि को माप गरेर। महिलाहरु मा 35 ईन्च भन्दा अधिक वा पुरुषहरुमा 40 ईन्च भन्दा कम छ कि कमर परिधि अस्वस्थ छ। कारण भनेको हो कि तपाईं एकपटक धेरै पेट वोसो छ; त्यहाँ तपाईंको अत्याधुनिक अंगको वरिपरी धेरै फ्याट छ, यसैले चयापचय सिंड्रोम, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल र मधुमेहबाट पीडाको जोखिम बढ्छ। भिजुअल वोसले पनि विषाक्त पदार्थहरू उत्पन्न गर्दछ जुन तपाईंको शरीरको कामलाई नकारात्मक असर पार्छ। यी रसायनहरूको एउटा उदाहरण साइटोकिनहरू हो जसले हृदय हृदय रोगहरूको नेतृत्व गर्दछ। आश्चर्यजनक कुरा, तपाइँलाई आवश्यक छ टेप उपाय हो, र तपाइँ सधैँ यसलाई आफैं गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो पेट मा चूसने को लागि प्रलोभन हुन सक्छ, तर यो केवल तपाईं गलत परिणाम दिनेछ।
25 भन्दा कमको BMI र एक कमरलाइन जुन एक पुरुषको लागि 40 ईन्च भन्दा माथि छ वा महिलाको लागि 35 ईन्चले तपाईंलाई कम महसुस गर्नुपर्दैन। सुसमाचार यो हो कि एकपटक तपाईंले प्रयोग गर्नु वा listlistat, आफ्नो आहार जाँच गर्नुहोस् र तपाईंले व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा चाँडै तपाईं सोच्नु भन्दा अतिरिक्त पाउन्ड बहाउनुहुनेछ। र चाँडै तपाईं सुरु हुनेछ, राम्रो यो तपाईंको लागि हुनेछ। Orlistat नतिजा तपाईले दबाइ शुरु गर्नुहुँदा चाँडै चाँडै सुरु हुँदैछ।
Orlistat को प्रयोग को लाभहरू के हो?
विगतमा, वजन घटाने मार्ग तपाईले लिनुभएको क्यालोरीहरूमा काटिएको छ। तिनीहरू केही फलफूल सलादका लागि बर्गर स्विच गर्दथे, केकको सट्टामा एक नींबू लिन्छ र यसले तिनीहरूलाई पाउन्डमा कमीको प्रतिज्ञा गर्नेछ। आजकल, तपाईं आफ्नो मनपर्ने कुकी लिनको लागि सम्झना छैन, कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ यसलाई अतिरिक्त मा लिनुहुन्न र एकै समयमा लिनुहोस् वा सूचीबद्ध गर्नुहोस्.
एक वजन घटाने पूरक हुनु, यसले तपाईंको भूख दबाब गर्नेछैन तर केवल अस्वस्थ वसा को अवशोषण कम गर्नेछ। तपाईंले खानेकुराको मात्रा परिवर्तन गर्नुको सट्टा, यसले शरीरमा लिन्छ परिवर्तन गर्दछ। वसाको चौथाईमा रोकिएको बेलामा, शरीरलाई भण्डारित वसा प्रयोग गर्न को लागी ऊर्जा को लागी यसको दैनिक दिनको लागी प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छ। गतिविधिहरू।
अभ्यास अभ्यास र एक स्वस्थ आहार संग संयुक्त, यस औषधीले तपाईंको शरीर लक्ष्य सम्म पुग्न सहयोग गर्न वजन कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
न केवल तपाईंको आत्मविश्वास एक उच्च उच्च जान्छ तर तपाईंको आत्म-सम्मानले महत्त्वपूर्ण सुधार गर्छ। मानिसहरू अब अलिकति भाडाको कारण तिमीहरूमा घूरिरहनेछैनन्; थप प्रशंसा अब तपाईंको बाटो आउनेछ।
वजन कम गर्नु तपाईंको शरीरमा सबै भन्दा राम्रो चीज हो। यसले तपाईलाई नियमित अस्पतालको भ्रमणबाट रोक्छ किनभने यसले केहि रोगहरू प्राप्त गर्ने जोखिमलाई कम गर्दछ:
गेस्ट्रिक रिफक्स लक्षणहरू
घुटने समस्याहरू जो अतिरिक्त वजनसँग सम्बन्धित छन्
कमजोर कमजोर (खासगरी महिलाहरु मा)
केही प्रकारका क्यान्सर
टाइप गर्नुहोस्2मधुमेह र यससँग सम्बन्धित जटिलताहरू
यसले तपाईंलाई अधिक ऊर्जावान र मोबाइल बनाउनेछ। एक पटक तपाईंले वजन गुमाउनु भएपछि, तपाइँ कम वजन लिनुहुन्छ यसैले जोडहरू र मांसपेशिहरु मा कम तनाव छ। तपाईं आफ्नो गतिविधि र पछि, पैदल, घुट्ने र खुट्टा पीडा अतीत को चीज हुनेछ को लागी अधिक ऊर्जावान हुनेछ। के यो छ कि तपाईंको पेटको वरिपरि गुमाएको कुनै इन्च सय सय पाउन्डमा तपाईंको ब्याकमा दबाब कम गर्दछ। बन्डर अब अपहिल कार्य हुनेछैन; तपाईं बिना यो बिना सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले तपाइँको सास फेर्न र सुत्न सुधार गर्नुहुनेछ। राम्रो निद्राले तपाईंलाई दिनहुँ थप ऊर्जा पाउनेछ। सामान्यतः, Orlistat तपाईंको समग्र स्वास्थ्यको लागि सही छ।
Orlistat लिने साइड इफेक्टहरू के हुन्?
नोटिस गर्न सामान्य छ Orlistat को साइड इफेक्ट्स एकपटक तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ। तपाईं केहि साइड इफेक्ट्स अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ वा न कुनै अन्य औषधि लिन पछि मात्र। अधिकतर प्रभावहरु जुन ओर्लिस्टरेट को उपयोग संग आउँछ त्यो तपाईंको पाचन तंत्र मा काम गर्दछ। जब तपाइँ उपचार सुरु गर्नुहुन्छ तिनीहरू प्रायः हल्का र नियमित रूपमा हुन्छन्। उनीहरूले उच्च-फूड भोजन लिइसके पछि पनि हुन्छ। सौभाग्य देखि, तिनीहरूमध्ये धेरै टाढा उपचारको रूपमा र सही आहार पछि पछ्याउन जान्छ।
प्रत्येक दस व्यक्तिमा एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने सबैभन्दा छिटो साइड इफेक्टहरू:
टाउको दुखाइ - यदि तपाईंको टाउको दुखाइ छ भने, त्यस्ता तरिकाहरू छन् जुन तपाईंले यसलाई कम गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा मस्तिष्क लिनु भनेको दुखाइ हटाउनु हो। साथै, तपाईं अदरक चाय वा कैफीन लिने प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो टाउकोको मालिश र विश्राम गर्ने अभ्यासले तपाईंलाई दुखाइ कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। अर्को टाउकोमा तपाईले टाउकोको दुखाइ सामना गर्न सक्नु भएको अर्को तरिका द्रुत कम्पाइन्ट वा हीट प्याड प्रयोग गरेर दुखाइ कम गर्न को लागी हो।
पेट दुखाइ / असुविधा - पेट दुखाइमा तपाईलाई चिन्ता हुँदैन। यदि यो तपाईंको दैनिक क्रियाकलापलाई प्रभाव पार्छ भने तपाइँले आफ्नो पेटमा गरम गेहूं थाम वा गरम पानीको बोतल लगाउन सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईंले आफूलाई न्यानो स्नानमा सुत्न सक्नुहुनेछ। यदि यो काम लाग्दैन भने, स्पष्ट तरल पदार्थ पिउने प्रयास गर्नुहोस्, जस्तै, पानी।
हजुरआमाको भ्रमण गर्नु आवश्यक छ- यदि तपाई आफैं भन्दा बढी सामान्यतया फिक्री खोज्नु हुन्छ भने, तपाइँ यो गर्न आग्रह गर्न बेवास्ता गर्दैनन्। कललाई बेवास्ता गर्दा लक्षणहरू बिग्रेका छन्। यो अलार्मको कारण हुँदैन तर यदि यो जारी रहन्छ, डाक्टरको ध्यान खोज्नुहोस्।
तेल निर्वहन - एकपटक तपाईं Orlistat उपचारमा हुनुहुन्छ, तपाईं ध्यान दिनुहुन्छ कि तपाईं आफ्नो व्यायाम धुकाइरहेका छौं वा तपाईंको अनुभवको वरिपरि क्षेत्र नम छ भन्ने महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। शर्मिराख्नदेखि बच्नको लागि तपाईंले गहिरो प्यान्ट लगाउन सक्नुहुनेछ र घरबाट बाहिर अतिरिक्त जोडीहरू लैजान सक्नुहुनेछ।
फैटी मल-फ्याटी स्टूल भएको कारणले शरीरले मोटो पखाल्न सकेन र त्यसको सट्टा सफा गर्यो। धेरै मोटाई भएका खानाहरू बाट बच्न, तपाइँ आफ्नो शरीरलाई धेरै वसा हटाउनदेखि रोक्न सक्नुहुन्छ।
हल्का छाला रैछ- हरेकले स्पष्ट छाला हुन मन पराउछ, तर यदि छालाको पातलो विकास हुन्छ भने, यसलाई यहाँ राख्नुका साथै विचारहरू छन्। पहिले तपाईको छाला सफा गरी हल्का साबुनको साथ सफागर्दै छ। स्क्र्रबिंग र खरोंच सामग्री प्रयोग गरी राम्रो भन्दा बढी हानि गर्न सक्छ। यदि तपाईंलाई कुनै पनि खुट्टा वा दुखाइ महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ढोकामा गीला कपडा राख्न सक्नुहुन्छ। एक ओभर-द-काउन्टर हाइड्रोस्रोर्टिसोन क्रीमले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ।
पछाडि दुखाइ - यहाँ पीडा दुखाइ कसरी कम गर्ने बारे विचारहरू छन्; तपाईंको पछाडीका भागहरूमा ताप वा बर्फ लागू गर्नुहोस् कि प्वाइङ्गिङ गर्दै, निप्रोक्सन, इबोप्रोफन र एस्पिरिन जस्तै पेन्सिकोप्टरहरू लिनुहोस्। व्यायामले पनि दर्द घटाउन मद्दत गर्दछ तर यो हातबाट बाहिर जान्छ भने, चिकित्सा ध्यान खोज्नुहोस्।
फ्लू लक्षणहरू, गहिरो गले, चिसो र बुखार हुन। तपाईं तिनीहरूलाई गम्भीर हुनबाट रोक्नको लागि रहन तातो विचार गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाइँ कुनै पनि दुखाइ अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एटटिमेटोन जस्तै अति-क्यान्सर दर्दकलाहरू किन्न सक्नुहुन्छ।
खाँसी लक्षणहरू, खुट्टा, र भरपूर नाक जस्ता चिसो लक्षणहरू- कहिलेकाहीं चिसो लक्षणहरू कहिलेकाहीँ प्रयोगको साथ सम्बद्ध हुन सक्छअसुरक्षित रूपमा तपाईले तपाईंलाई बनाउनुभएको छ, यहाँ भावना संग व्यवहार गर्न ह्याक्स हो। आफ्नो गलालाई कम गर्नुहोस्, धेरै आराम पाउछ र निर्जलित भएको देखि आफूलाई रोक्न धेरै तरल पदार्थ पिउन। तपाईं नाक बूँदहरू नाक भित्तालाई राहतमा सहयोग गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि ठुलो लक्षणहरूले तपाईंको दैनिक गतिविधिलाई असर गर्छ भने डाक्टरको ध्यान खोज्नुहोस्।
गज वा दाँतका साथ समस्याहरू - यस समस्याको समाधान गर्न तपाईले नियमित रूपमा आफ्नो दाँत ब्रश गर्न, आफ्नो ग्याम लाइनलाई मालिश गर्नु र प्रायः मुखवाश प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। तपाईं घरमा आफ्नो मुखवाट पकाउने सोडा, आठौं चम्मच नुन र न्यानो पानीको एक कप चतुर्थ चम्मच मिश्रण गरेर गरेर गर्न सक्नुहुन्छ।
आकस्मिक दुखाइ, दस्त, उल्टी, नली र पेटको दुखाइ - डाइरेक्ट्रीबाट बच्नको लागि धेरै स्पष्ट तरल पेनुहोस् - शराब वा कैफीनबाट बच्न। प्रोबायोटिक्स खाने प्रयास गर्नुहोस् तर यदि यसले तपाईंलाई सहयोग गर्दैन भने, स्वास्थ्य प्रदायकको ध्यान खोज्नुहोस्।
यदि तपाइँ यी दुबै दुबै प्रभावहरू मार्फत जान्नुहुन्छ भने, तपाईले यसलाई आपातकालीन रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ र तुरुन्तै डाक्टरलाई फोन गर्नुपर्छ। उनीहरु;
चरम पेट दुख्ने हो कि छैन।
हिप्स वा अत्यधिक खुट्टा
Orlistat, Sibutramine, र Lorcaserin को बीच के अंतर छ?
वस्तुको तुलना Orlistat (96829-58-2) Sibutramine (84485-00-7) Lorcaserin(846589-98-8)
कार्यको मोड Orlistat कसरी काम गर्दछ? Orlistat शरीर मा बोसो सेवन को रोकथाम को माध्यम ले काम गर्दछ। नतीजा, शरीरले भण्डारण गरिएको फ्याट माथि प्रयोग गर्दछ किनकी वजनको हानि। Lorcaserin एक महसुस महसुस गरी काम गर्दछ किनकि खाना लिन्छ को मात्रा कम गर्दछ। यो Serotonin 2C रिसेप्टरहरू उत्तेजित गरेर यो गर्दछ। Sibutramine मस्तिष्क काम मा न्यूरोट्रांसमीटर को मार्ग बदलन को काम गर्दछ। यसले शरीरको बिरुवाको बिरुवालाई बदल्छ।
शरीरमा साइड इफेक्टहरू Orlistat कारण साइड इफेक्टहरू जुन अत्यधिक पाचन प्रणाली जस्तै उदाहरण, ढीलो मल, नली, दस्त र उल्टीलाई असर गर्छ। Lorcaserin को लागि यो कारण हुन्छ; लिम्फोकोपिनेशिया, उत्थोरिया, हेमोग्लोबिन र एक टाउको दुखाइ घट्यो। सिब्युट्रामिनले चिन्ता, छातीको दुखाइ, अनुहार, मुँहासे, पेट दुख्ने, सुक्खा मुटु, सिरदर्द र सुत्न असक्षम बनाउँछ।
Sibutramine एक वर्ष को अवधि मा 4.2% द्वारा वजन कम गर्न सक्छन् जबकि Orlistat यसलाई 5% द्वारा कम गर्न सक्छन् जबकि Lorcaserin यो बारह महीनों मा 5-10% को कम गर्दछ।
त्यहाँ कुनै पनि ड्रिगरेसन हो जो Orlistat नतिजालाई असर गर्छ?
यहाँ Orlistat सँग कुराकानी गर्ने दबाइहरूको सूची हो।
अन्डेन्ड्रोनट / च्युलेटक्यालकोफोलोल (फोस्याक्स प्लस डी)
एम्योडेरोन (प्यासेरोन, नेक्सनोन, कर्डारोन चतुर्थ, कोर्डारोन)
एल्लग्लिपिन / पिओलोलिजोनोन (ओसनी)
अलीलग्लिनिन / मेटाफर्मिन (काजानो)
अजान्जाविर / कोबिकिस्ट (इवाराज)
कालो कोहोश (रजोनिवृत्ति समर्थन)
बिक्गीग्राभिर / एमिट्रिटाबिन / टेनोफोभिर / अलाफेनमाइड (बाइकिर्वी)
काबिकिटिट / emtricitabine / darunavir / tenofovir alafenamide (Symtuza)
कोबिकिटिट / डरानाभिर (प्रिकबक्स)
Cholecalciferol / lactobacillus reuteri (BioGia प्रो Tectis)
Cholecalciferol / फलाम polysaccharide (नोवाफेरोम 125)
Cholecalciferol / genistein / जस्ता गिलीकेनेट (Fosteum, VP-GSTN, Fosteum प्लस)
Cholecalciferol, जिंक Chelazome / जीनस्टाइन
Cholecalciferol / फोलिक एसिड
Cholecalciferol (डिक्टा, Replesta, भिटामिन D3, D3)
भिटामिन डी / कैल्शियम
क्याल्कियरिओल (क्यालेडोल, रेएल्डलिडी)
Exenatide (बर्डरन बीसी, बिएटा, बर्डरन)
एर्गोकोलसेफोलोल (क्याल्कोडोल, क्याल्फेरेरोल, ड्रिसडोल, भिटामिन डीएक्सएनएमएक्स)
इप्रिब्यूबिन (फार्मारोबिकिन आरडीएफ, फार्मारोबिकिन पीएफएस, एलिस)
ग्लिसरोल फेनेलबुटियेट (रैच्छिक)
Glyburide / मीफर्मिन (Glucovance)
ग्लीबाइड (ग्लूकोन, गिलेन्स प्रेस्टाब, गिलिनज, माइक्रोनसेन्स, मधुमेह)
इंटरफेरोन बेटा-एक्सएनएमएक्सएक्स (एक्विभिया, बेटासेसन)
इंटरफरन बेटा-एक्सएनएक्सएक्स (एवोनक्स पेन, एवोनक्स प्रिफेड सर्रिङ, रेबिफ रिबडोज, रिबफ, एभोनक्स)
इन्सुलिन जस्ता विस्तारित (Humilin यू)
इन्सुलिन जस्ता (आईलेटिन II लेन्ट पोर्क, आईलेटिन लेन्टेन, नोवलोएल एल, लेन्टे इलेटिन II, Humulin एल)
इन्सुलिन इन्सुलेशन, तीव्र अभिनय
इन्सुलिन चमक / lixisenatide
इन्सुलिन degludec / liraglutide
इन्सुलिन एस्सार प्रोटोमाइन
लोपिनभिर / रितोनाभिर (कालिरा)
लिरागालुटाइड (ससेन्डा, विकोट्ज़ा)
लियोट्रिक्स (थ्यरोलर 3, 2, ½, ¼, 1)
लियोथेरोनिन (ट्रस्टोस्टैट, साइटिमोल)
नल्ट्रेक्सोन / ओक्सीकोडोन (Troxyca ER)
नल्ट्रेक्सोन (डिप्रेड, रिभिया, विभिट्रोल)
खनिजहरु संग बहुव्यापी
फलाम र फ्लोरोइड संग मल्टीभिटामिन
वाल्फिन (जेन्टेनन, कूडमडिन)
यूबीक्विन / भिटामिन ई
स्टाभुडीन (जेरिट एक्सआर, जेरिट)
सिम्भस्टिनटिन / साइटिग्लिपिन (ज्यूविसिस)
महत्त्वपूर्ण जानकारीmations Orlistat को बारे मा
Orlistat लिनु अघि, तपाइँलाई यसको बारेमा जान्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण विवरणहरू छन्।
पहिलो यो हो कि यदि तपाईं यसलाई एलर्जी हो भने यो औषधि प्रयोग गर्नुपर्दैन। साथै यदि तपाइँसँग पुरानो मालाबोसोपेसन छ (यो खाना र पोषक तत्वहरूलाई सही रूपमा अवशोषित गर्न असक्षम छ) वा कुनै पनि पछाडि समस्याहरू। तपाईंको शरीरमा कसरी सिन्फिफ्रेन्स एचसीएल काम गर्दछ?
तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा सबै जानकारी बताउनु पर्छ। यसमा अतीतमा र तपाईंसँग भएको कुनै पनि दबाइमा पीडित रोगहरूको बारे मा उनको साथ छलफल गरिरहेको छ। एक चिकित्सकलाई थाहा छ यदि तपाई जिगर रोगबाट पीडित हुनुभयो, विकार खाने खालको, 1 वा2मधुमेह, प्यान्रेट्रेटाइटिस, गेलस्टोन वा कम निष्क्रिय थाइरोइड टाइप गर्नुहोस्। यदि तपाइँ कुनै पनि अन्य वजन घटाने औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ डाक्टरलाई बताउन संकोच गर्न हुँदैन।
जो कोही अठारह वर्ष भन्दा पुरानो उमेरको हो अथवा Orlistat प्रयोग गर्दैन। यदि तपाइँले 18 भन्दा कम हुनुहुन्छ भने काउन्टर वा निर्धारित गर्नुपर्दछ, तपाईले डाक्टरको सल्लाह खोज्नुपर्छ।
Orlistat ले मात्र लिनु पर्ने सिफारिस लिनु पर्छ। यसको कारण यो हो किनकि यसले उनीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन सक्दछ विशेष गरी यदि उनीहरूको खाने विकार छ। तपाईं यो कसरी बच्न सक्नुहुन्छ? अरुको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
उत्तम प्राप्त गर्न Orlistat परिणामहरू तपाईले यो औषधि मात्र एक्लै प्रयोग गर्नुहुन्न। यो तपाईंको वजन घटाने को कार्यक्रम को भाग हुनु पर्छ र व्यायाम र आहार संग संयुक्त हुनु पर्छ। यो औषधी लिँदा तपाईंको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न, तपाइँले उपभोग गर्ने हरेक खानामा तपाइँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन र वसा ले समान रूपमा वितरित लिनुहोस्। थप रूपमा, आफ्नो आहार पालन गर्नुहोस् र कडा रूपमा अभ्यास गर्नुहोस्।
आहार लिनु भनेको धेरै वसायुक्त हुनुहोस् किनभने तपाईले तिनीहरूलाई Orlistat सँग एकसाथ लिनुभयो, तपाईं आफ्नो आंत र पेटमा अप्रिय साइड इफेक्टहरू समाप्त हुन सक्नुहुनेछ।
कुनै गर्भवती वा स्तनपान आमाले कभी पनि Orlistat लिनु हुँदैन। यसको कारण यो यो जन्मे वा चूसने बच्चालाई पारित गर्न सकिन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं Orlistat प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अघि गर्भावस्था परीक्षण गर्नुहोला। यदि तपाइँ यो औषधी लिनु गर्भवती हुन्छ भने, आफ्नो स्वास्थ्य प्रदायकसँग कुराकानी गर्नुहोस्। यस औषधिले तिनीहरूलाई कम प्रभावकारी बनाउन सक्छ भने गर्भनिरोधक लिँदा थप सावधान रहनुहोस्।
Orlistat तपाईंको वजन घटाने परीक्षा को अन्तिम समाधान हो। Orlistat नतिजाहरूले एक हप्तामा एक भन्दा बढी पटक हराउन मद्दत गरेका छन्; यो स्वस्थ वजन घटाने हो। यसबाहेक, यसले तपाईंलाई आफ्नो वजन कायम राख्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाईं आज राम्रो नदेख्ने र केहि दिन पछि तपाईंको सबै वजन पाउनुहुनेछ। आफ्नो आहार जाँच गर्नुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। तपाईंसँग एकै समयमा चिप्स मच र चकलेटको पट्टी गर्न पनी छैन। तपाईं सधैं अर्को दिन को लागी भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ। व्यायामले यो प्रक्रियालाई जगेडा गर्न मद्दत गर्नेछ, र यो गर्न सक्नुहुने सबै भन्दा सरल तरिका जिममा छ। एक व्यक्तिगत प्रशिक्षकले तपाईंलाई आफ्नो खुट्टामा राख्न मद्दत गर्नेछ। उहाँले तपाईंलाई सल्लाह दिनुहुनेछ जुन तपाईंको शरीरको प्रकारका आदर्श कार्यहरू हुन्। यो या त बाइकिङ, वजन वा कार्डियो हुन सक्छ। यदि तपाईं जिमको प्रशंसक हुनुहुन्न भने, बाइकिङ वा दौडले पनि तपाईंको लागि काम गर्न सक्छ।
Orlistat एक एफडीए स्वीकृत वजन घटाने लागू औषधि हो जुन यसको प्रभावकारीता को लागि व्यापक रूप देखि जानिन्छ। Orlistat समीक्षाहरू यसको बारे मा अधिक मात्रा बोल्छ यो यसको उपयोग गरेर अधिकांश मानिसहरु संग 5% एक वर्ष मा आफ्नो कुल वजन को खोने मा अधिक। यसको फाइदाहरू पाउन्डहरू हराइसकेको छ किनभने यसले जीवन-धम्की जस्ता अवस्थाहरू जस्ता रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्रल स्तरको जोखिम कम गर्छ।
तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि Orlistat किन्नुको लागी जादू अनुभव गर्ने तपाईको वजनमा। Phcoker.com मा, हामी Orlistat बेचछन जसको शुद्धता सम्झौता छैन। The Orlistat मूल्य सस्ती छ, र हामी तपाईलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं कि तपाईंले खर्च गर्ने प्रत्येक रकमको लागि मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। हाम्रो साथ अर्डर राख्दा तपाईंको समय धेरै समय लागेन, तपाईले गर्नु भएको छ तपाईंको विवरण, प्रश्नावली भरिएको छ र तपाईंको अर्डरको अनुमोदनको लागि पर्खनुहोस्। एकपटक तपाईंले भुक्तान गर्नुभएपछि, हामी दबाइ पठाउनेछौ, र तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि यो तपाइँको स्थानमा पुग्न लामो समय लाग्ने छैन।
वजनको उचाल खोल्न जटिल हुनु हुँदैन। आज Orlistat किन्नुहोस्, गोलाहरु आफ्नो घर को आराम मा पप र आफ्नो वजन को महत्त्वपूर्ण रूपमा कम देख्न।
आर्मेन बी क्रिस्टोभा, स्टेफनी आर डी विरीज, स्टेफनी डेभिरी, पृष्ठ 426- 437 द्वारा सम्पादन गरिएको फैट पाचन र अवशोषण।
Obesity अनुसन्धान मा प्रगति: 9, Geraldo Madeiros-Neto, एल्फ्रेडो Halpern, क्लाउड Bouchard, पृष्ठ 1046 द्वारा सम्पादन।
प्राथमिक हेरचाह मा मोटापा र वजन प्रबंधन - कोलिन वीन, निक बोस्नकेट, पृष्ठ 68-71 द्वारा।
2019-03-263मा: 27 बजे
2019-10-257मा: 20 बजे
मेरो गिलाब्स वर्डवाइडरको रूपमा एको होइ ब्लाइडड्रुक पिल ड्रिंक जस्तो कन ईके डाई प्रोडक्ट गेब्रिक? En waar kan ek dt bestel?
2019-10-263मा: 33
यो ओर्लिस्ट-उत्पादमा ओन्टाभ्यान्जमा क्लिक गर्नुहोस्।
हामी यो कुरा जान्दछौं कि हामी यो कुरा भन्छौं, माफ गर्नुहोस्।
एर वर्ड गीजेग्ड डाट ओलिस्ट्याट ओरल कान इननेमेन पानी भेट्यो, ओन्ज मिनिमाले बेस्टेलिंग एक्सएनयूएमएक्स ग्राम छ, यो तपाईको व्यक्तिगत ओम वाट टे कोपेन हो?
Erectile Dysfunction for Vardenafil (LEVITRA) लिदै